Amaqembu ezigelekeqe azinze Osizweni aphendula imigwaqo ibe “indawo yempi” futhi - Isambane News
Amaqembu ezigelekeqe azinze Osizweni aphendula imigwaqo ibe “indawo yempi” futhi
Sekuphele isikhathi eside anyamalala, amaqembu ezigebengu ezizinze Osizweni, asebuyele emgwaqeni,adala isiphithiphithi. Lokhu kuvele ngokwemibiko nezithombe zezakhamizi zendawo. Ukwenza isibonelo, izenzo ezahlukene zodlame zenzeke ngempelasonto edlule,10 kuya ku-12 Juni 2022,okusolwa ukuthi zihlobene namaqembu ezigelekeqe.
Ukwengeza, kwavela izithombe zevidiyo zamalungu ezigelekeqe ezulazula emigwaqweni ethulile yase-Osizweni. Ividiyo ibonakala iqoshwa ngomhlaka-13 Juni 2022,ngosuku olungemva kwezigameko. Intsha esanda kweva eshumini nambili, eningi engaphansi kweminyaka engu-18, ngokusobala ihamba nezikhali ezingekho emthethweni,ezifihliwe
Ngokusho kwesakhamuzi esingathandanga ukudalulwa igama,kuqubuke impi phakathi kwamaqembu ezigelekeqe,okuyiLast Warning kanye neJuveniles. “Kubulawe abafana abahlanu kwashiswa izindlu ezimbili ngenxa yamaqembu ezigelekeqe amabili abelwa,” kusho isakhamuzi. Umthombo uqhube wathi yena namanye amalungu omphakathi bebephila ngaphansi kwefu lokushuba nokwesaba. “Abafana balezi zigebengu kumele basuswe emphakathini wethu.”
Ephendula uphenyo lwethu,umkhulumeli wesifundazwe saKwaZulu-Natal,uBrigadier Jay Naicker,uveze ukuthi amaphoyisa aseMajuba aseqoqiwe kulandela ukuqubuka kodlame oluhlobene namaqembu ezigelekeqe eNyakatho neKwaZulu-Natal Osizweni. Lokhu,ngokusho kukaNaicker kwenzeke ngempelasonto edlule.
Wengeze wathi,“Amalungu oPhiko lwamaphoyisa ophiko lwePublic Order Police Unit kanye neThimba Lomsebenzi Wesifunda ajutshiwe ukuze aqinise amandla esiteshi samaphoyisa sendawo. Isimo sesibuyele kwesejwayelekile kulandela ukutheleka kwamaphoyisa kule ndawo.”
UBrigadier Naicker uqhube wagcizelela ukuthi umbutho wamaphoyisa aseNingizimu Afrika uphinde wanxusa izinhlaka zomphakathi ukuthi zisebenzisane namaphoyisa futhi zibambe iqhaza ekutholeni isixazululo saphakade sokuqeda izigebengu ezihlala Osizweni, ezihlukumeza izakhamuzi.
Yize libonga ukugcwala kwamaphoyisa Osizweni,leli lungu lomphakathi likholelwa kakhulu ekutheni izikhulu zamaphoyisa esifundazweni noNgqongqoshe wamaPhoyisa,uMnuz Bheki Cele, kumele babuyele emphakathini ukuze balusukumele ngokugcwele lolu daba.
Emuva kokubika ngezimpi zamaqembu ezigelekeqe eziqubuke elokishini,udlame lwentsha lwezigelekeqe lwadonsa amehlo esizweni.Lokhu kubone uNgqongqoshe wamaPhoyisa uCele esukumela phezulu waluqeda lolu daba ngo-2020.
Ngaleso sikhathi,izithombe ze-video zikhombisa izingane ezihlomile zizulazula emigwaqweni yase-Osizweni, amaphoyisa endawo ethi lezi zingane ziyagqekeza,zigebenga kanye nezidakamizwa.
Isimo sifinyelele ezingeni kangangokuthi umphakathi wase Osizweni wahlangana ndawonye,​​wabamba iqhaza emashini,lapho udluliselwe khona incwadi yohlu lwamaphoyisa Osizweni,ifuna kuthathelwe izinyathelo.
Ngenxa yokushuba kwesimo emphakathini kube nembizo Osizweni lapho uNgqongqoshe wamaPhoyisa uCele nethimba lezikhulu eziphezulu zeSAPS bekhuluma nezakhamuzi. Baphinde baqinisekisa ukuthi amaphoyisa asesungule amaqhinga ahlukene okubhekana nalolu daba okubalwa kuwo iCommunity Policing Strategy kanye nohlelo lokunqanda ubugebengu entsheni.
Kulandela ukuvakasha kukaCele,umsebenzi wezigelekeqe waphela ngokushesha.
Uma sibheka okwamanje,kuthintwa ihhovisi likaNgqongqoshe wamaPhoyisa uCele ukuze aphawule ngokuthi uzophinde aludingide yini lolu daba. Nokho, akukho ukuphawula okusemthethweni okunganikezwa ngesikhathi sokushicilela.
Nokho, iMeya kaMasipala wesiFunda Amajuba,uCllr Vuselwa Bam,kanye noSomlomo wesifunda, uKhansela Siphamandla Zulu,bahlangane nezinhlaka ezahlukene,iminyango namakhansela ngoMsombuluko,13 June 2022 ehholo lomphakathi Osizweni.Lokhu,ukuze kubhekwane noHlelo Lwentsha Lwemikhakha Ehlukene oludingekayo ekusizeni udlame lwamaqembu ezigebengu.
Ngenxa yalokhu,uphiko lwezokuXhumana kuMasipala wesiFunda luthi ubuholi bukaMasipala wesiFunda saseMajuba manje bunxusa zonke izinhlaka ezithintekayo kanye nemiphakathi yonkana,ukuthi babeke izandla namakhanda ndawonye ekulweni nezigelekeqe nobugebengu.
Owesifazane waseMlazi ugwetshwe ngokuvota izikhathi ezingu-24 okhethweni lohulumeni basekhaya